HD med ftp ru Filezilla Server E Windows 7 – Taylor Lopes ツ Blog
HD med ftp ru Filezilla Server E Windows 7
Nokuda kufarira Post “Ita HD yako PaIndaneti Via ftp“, Ndakaita danho nedanho kuti akamisa chifananidzo ftp Server wako compatilhar HD uye kuti nyore kubva chero kombiyuta paIndaneti (KWAKAKWANA!).
No Post Anterior “Ita HD yako PaIndaneti Via ftp“, kushandisa CesarFTP + Windows XP kumisazve zvedu ftp Server. Kunyange vanokurudzira kuverenga dzine zvimwe zvinhu kuchaita kuti haana kuramba kuti nguva ino.
Next Post, tikavakira ftp Server pamwe Filezilla Server + Windows 7. mifananidzo saka zhinji (printscreen) kuti zviite kunzwisisa kuti vanenge ikava firimu (mhamhidzirwa :D), kodzero kukwikwidzana kuti Oscar pamwe Avatar uye Elite kukupfura 2. ndokubva, uyai!
Download Filezilla Server kusunungura zvakananga kubva yokuvaka peji: http://filezilla-project.org/
Installation iri nyore: Mhanyai faira iwe paIndaneti; Unongofambisa matanho zvose, pasina kuchinja chinhu! Chero zvazvingava, Ivo vapoterere chidzitiro diki:
Filezilla Server – kugadzwa
Filezilla Server – kugadzwa | rejira magumo
kamwe yakaiswa, Filezilla Server achaitwa akatanga uye nhaurirano inowanikwa achaonekwa. Just kupinda anotarisira pasiwedhi, sezvinoratidzwa pazasi:
Filezilla Server – kugadzwa | Password maneja
makorokoto! Your ftp Server zvagadzirwa zvino, tichimirira kwokubatana.
Filezilla Server – kugadzwa | achimhanya…
Kuti akamumutsira inokosha, Unongofanira kuita kuchinja shoma. Izvi zvinofanira kuitwa kubudikidza Muterere Edit> Settings. zvisati, I hunoratidza kusika munhu dhairetori (Pasta) apo zvichaita mafaira dziripo ftp. somuenzaniso, Ini akasika dhairetori D:\_Ftp mbiri mafaira mukati. mune mamwe mazwi, zvose zviri Directory uyu zvandiri kuda kuita dziripo ftp kubvira pose panyika.
Definition of ftp Directory
Kushandura chiteshi apo Server vachatitaka “teerera” pamusoro 21 nokuti 2100. KUTARISIRA: Anogona kuva chero chimwe chiteshi, asi yeuka kuti kana chengarava ichi ichashandiswa dzokuzarura firewall uye router paya, uyewo chikamu kero kuwana zviri pedyo ftp. Zvikonzero ichi Mundaca I vakatsanangurira muzvirevo romukova, asi nokupfupikisa imhaka vamwe ADSL rinobatsirwa adzikatidza default ftp chengarava (21):
Wedzerai rokushandisa kubatanidza / authentication, hapana nyaya, I akasika iwe “arun”. Uyewo kuwedzera Directories (pastas) pamwe mafaira uchida mugove, Kupa kwavo kuwana Permissions (kuverenga, zvakanyorwa). Rangarira dhairetori D:\_Ftp I akasika? Tarisai iye kuratidza pano:
Pinda kuwanda maererano zvengarava mu pusa muoti. hapana nyaya, akashandisa rimwe chengarava saka kuwana kuwanda: 2101-2101. Pasinei ftp default chengarava kuti 21 (takatamira 2100), zvinozivikanwa kuti pachiteshi ichi ndicho chete yomumugwagwa chidhiraivho; nokuti date hill, Zvinonzi zvinobudirira kushandiswa mukova 20 (takatamira 2101):
KUTARISIRA: Kana uchironga kuita akawanda mawa kwokubatana (ftp), Zvinokurudzirwa kuti kuwedzera uku chengarava Range pusa muoti, vamwe mhando 2101-2301. pachena, uchava kuti itangezve zvengarava izvi, mhiri ftp (Filezilla), Pamusoro router uye firewall. A pusa kubatana, kana mutengi anoita kutamira chikumbiro (ftp), ari Server, kuti akamirira (munataisireva) kubatana, Ndiye anoudza nemhosva kuna chengarava humboo achapiwa vakatsinhanisa. chikumbiro ose itsva, kuti Server chinobatanidza kusvika yeGmail.END_STRONG chichishandisa chengarava pakarepo pamusoro, ko kuwedzera siyana date chengarava, kana kuti kubvumira mawa kwokubatana. zvimwe, zvingaitika akamirira matambudziko uye nguva yapera nokuti date chengarava 2101 kuva akasiyana, zvokuti pane Bottleneck mu zvinotevedzana kwokubatana, sezvo chiteshi anochengeterwa mutengi vari kushandiswa.
Muchisunungura firewall uye router
wakadzikama, wakadzikama! Harisi nguva yokuedza yako ftp Server. Danho iri dzinonetsa! matambudziko Most haagoni kuita kwako ftp basa hanya firewall zvinogumbura uye / kana router. saka, regai kupisa danho, kutevera danho nedanho uye kufara.
Enda kuna Windows Muterere Start> Control Panel> System uye Security> Windows Firewall.
Tinya kubatana kuruboshwe “Kubvumira chirongwa kana kuchiitwa kuburikidza Windows Firewall”:
Baya bhatani “Bvumira mumwe chirongwa…”:
kuwana “Filezilla Server inowanikwa”, sarudza izvozvo uye tinya bhatani “wedzera”:
Ona kuti “Filezilla Server inowanikwa” atova rinowanikwa mazita “Zvirongwa uye pfuma akabvumira”. zviri pamutemo!
ikozvino, kunyange Windows Firewall, tinya kubatana kuruboshwe “enderera kurongwa”. Stay zvirire, sezvatichakurukura kusunungura masuo 2100 E 2101 kwete Firewall kuita Windows:
Click “Inbound rules” uye zvadaro “Rule itsva…”:
sarudza “Protocol uye Zvengarava”, tarisa chinhu “porta” uye tinya bhatani “pachine”:
Sarudza chinhu “Nyatsonanga omunharaunda zviteshi” uye kutaipa mundima mumunda pedyo pamukova 2100 E 2101, sepakutanga rinorondedzerwa pazvinoitwa Filezilla. KUTARISIRA! Kana iwe achinja mikova mumwe, ndokubva, ndapota, changed pano zvakare, asi, hazvina kumboshanda. izvi, watinya “pachine”:
The musimboti, O chinhu “Bvumira kubatana” Zvinonzi kare segwapa. Just watinya “pachine”:
With mikana yose vakasarudzwa, watinya “pachine”:
Ipa zita nokuti mutemo. Ndakadana “ftp”:
nokukurumidza! The firewall configuration iri kare! Ona mutemo “ftp” kuti zvabudiswa suo 2100 E 2101 ari Firewall chava wakaumbwa “Inbound rules” regai Firewall kuita Windows:
Uyewo kugadzira yenyu Nat router (Wireless ou wired that), kana iwe, kuitira kuti musunungure kuchinjwa nechitarisiko motokari (Internet) musuo 2100 (wedu ftp kubatanidza chengarava) kuti kombiyuta iri kumhanya kwako ftp Server. For mashoko, Ona Post “Ita HD yako PaIndaneti Via ftp“. Asi hapana chakavanzika, pfungwa iri kuudza router wako kuti zvose zviri pamukova 2100, anofanira redirected kuti kombiyuta yako apo Filezilla, sezviri kuratidzwa:
KUTARISIRA: Mune zvimwe zviitiko, ungafanira kudzokorora nzira iyi Redirect motokari kuburikidza router uyewo mukova 2101 (wedu ftp date chengarava).
Uyezve, rayira waipedza SPI nezvechisarudzo (Stateful Packet Inspection) ari router firewall, sezvo yakaitika kukundikana uye somugumisiro inflow nekiyi. The SPI chinhu zvemichina kuti anoongorora omumasherufu mashoko akapiwa asati zvinovabvumira kupinda nemambure.
Pakupedzisira Tingaedza yedu ftp Server. Izvi zvinogona kuitwa nenzira dzakawanda, pakati pavo (1) Hair Internet Browser, (2) nokuda Windows Explorer kana (3) kuburikidza ftp yeGmail.END_STRONG kushanda.
Dambudziko zvakajairika kuti kurashika pamusoro Protocol kuti chikumbiro. Zvakarurama dzakati iri “ftp://”, zvimwe uchawana chikanganiso mhando “500 nemarongerwo kukanganisa, murayiro harimboonekwi” (izvi hazviitiki kwandiri, hahaha):
Pakutanga Ngatitaurei bvunzo achiita munharaunda kuwana. nokuti ichi, zarurai browser uye kutaipa ari kero bhaa: ftp://127.0.0.1:2100. Ona kuti tiri kushandisa chengarava 2100 IP kusvikira pakuguma! Nokukurumidza muchabuda Login bhokisi, vachikumbira authentication. Shandisai Username uye pasiwedhi iwe munguva aishandisa marongero configuration pamusoro Filezilla:
Kana zvose zvikafamba zvakanaka, icharatidza zviri “ftp” tinorondedzera kwete Filezilla, musoro, pamusoro yakakodzera User Access Permissions. Cherechedza kuti kugutsikana ndaiva mukati D:\_Ftp riri HD yangu iripo pano:
Chete zvinoitika Windows Explorer. Kurivhura uye kupinda ftp://admin@127.0.0.1:2100. Note kuti Ndakashandisa mushandisi “arun” pamwe IP, nekuti dzimwe nguva, Ungangokundikana kana asina kuudzwa:
Zvino kuti tinoshanda zvekwaunogara (127.0.0.1), isu unoshanda externally, saka kuti ane chikonzero Internet IP anogona kuwana ftp Server chero kombiyuta zvakabatana Internet. Kuziva IP yako yechokwadi, Rine dzakawanda. Ndaishandisa nzvimbo http://meuip.info/, pamwe nedzimwewo:
nyore, zvimwe? Tora IP ichi kuti akazviratidza ipapo kurishandisa panzvimbo yomunharaunda IP 127.0.0.1 (tsiva). Yeuka kuti dzakati iri ftp:// achiteverwa IP, ari muura (:) Icho ftp chengarava (2100). Zvinogona kuitika kuti kutora masekonzi mashoma kusvikira Login nhaurirano bhokisi.
The anogutsikana unoratidzwa ari Internet mubrowser zvinobudirira!
In Windows Explorer vo yapera zvakanaka. Enter zvakafanana ftp://admin@189.75.34.242:2100.
Just pazasi tinoona kuti HD kugutsikana (D:\_ftp) rinooneka 100%. zvakanaka, apedza Post ichi, Ndinoda kukuyeuchidzai kuti yakanaka haisi kushandisa musoro IP, nekuti ichi dzichichinja. ndokubva, sezvo ini akatsanangura yapfuura romukova, famba dambudziko uyu pokushandisa DynDNS kana No-IP. Hazvina vakasununguka!
Saka izvi ndizvo. rombo rakanaka!
Uwandu kwakafanorongwa: 158688
9 Gumiguru 2010 Taylor Lopes	filezilla Server. filezilla, ftp, HD, mahwindo 7, mahwindo nomwe
118 Wongororo “HD med ftp ru Filezilla Server E Windows 7”
Pingback: Ita HD yako PaIndaneti Via ftp « Taylor Lopes :: Personal Blog :: makombiyuta
OK, Ótimo romukova yakatsanangurwa kwazvo, zvisinei, zvose zvakashanda kwandiri kusvikira nguva kuisa zvekunze Rinozvikudza ip (189…) pamwe zvemukati Rinozvikudza ip
yangu muchina mabasa akanaka asi kana ndikaisa Modem Rinozvikudza ip kwete funfa achiyeuka kuti kare akapa mvumo kuwana mashoko
router mudzi. router rwangu dsl 2640T uye havana SPI nzira ndeyokuti kare akaedza zvinenge zvose uye kwete zvokunze kuwana… ichazovapo dambudziko???????????????
18 Ndira 2011 kuti 0:05
Pamwe hausi hwokutiparadza kaviri? Nokuti vamwe ADSL modems uyewo kuita sezvo routers, panofanira kugadzira Nat nhivi… ona mashoko ari mhinduro Ndikakupai pazasi, kana kutora iverengwe mune imwe pambiru kuti mhinduro: http://taylorlopes.com/?p=1021. svondo rino waunoziva aisagona kuwana kubva kunze (Internet) mukati (Lan), Ndaiva Modem pamusoro GVT dzaivawo router. ipapo, kuvaringana kugadzira Virtual Server Modem, achinongedzera Wireless router, uye Wireless Rodeador achinongedzera muchina pamwe Filezilla Server, uye ipapo akaenda basa. An chinokosha, Handizivi chikonzero, alguns fashoni (kana opareta GVT) ngarirege loopback, mune mamwe mazwi, kuwana kero zvekunze, kana uri mukati yomunharaunda rezvebonde. Somuenzaniso: kuwana kombiyuta iri samambure wako URL DynDNS, zvakafanana http://meuftp.dyndns.org:2100. muchiitiko ichi, kana mukati (Lan), kuwana Lan IP kana hostname apo ftp Server iri uye, kana uri panze (kumwe, kunze samambure yako), enda nokuti DynDNS dzako nzvimbo kana paine Internet IP. Falouuu…
19 Ndira 2011 kuti 20:11
Paul B. Boldrini akati:
Ndaiva 3 maawa kuedza akamisa chifananidzo ftp Server Private.
Kumboda kufamba mafaira kubva zvekunze HD (zvakabatana kuti mukabhuku) nokuti kana Android, zvose veko rezvebonde (WiFi) nekuti zvekunze kubatana (Mobile Indaneti, mumwe WiFi Network).
Chii rwamakaratidza chaizvo anoshanda, I watenga Modem UOL (SpeedTouch 510) uye Netgear Router (MR814 v2) uye kusunungura zvengarava pamusoro zvose Modem uye router, Zvakanga nokuzvisarudzira kuti Server (netbook) uye nokudaro zvemukati kwokunze kuwana kana kwete kushanda, asi kutevera muromo wako, uye akaisa Modem chengarava kuti router uye yakatarwa kuti Server (netbook)…. zvakashanda.
Of Tutorials siyana vakawana padandemutande, Eh kwayo kupfuura detailed.
(Ndichava nemasaini Site Feed)
27 Ndira 2013 kuti 1:50
Tarirai handigoni kuita. Kutevera Tutorial uye kururama mubrowser kushandisa kwangu womukati rezvebonde akapa kukanganisa, Ndinogona chete angadaro ari aiongorora. Zvino Internet kunze nemambure regai kuwana chinhu (pedyo Browser kana akaongorora anoona uye anopa shoko richiti Handibvumirwi). Ini asunungurwa mukova, kare Akasunungura firewall mahwindo zvose kuti Network yangu, I akanongedza muchina wangu iiswe uye configured ari Server. Hongu zvakare kuoma. Pane munhu ini rubatsiro?
20 Chivabvu 2013 kuti 19:40
Zvaizova zvakanaka here nani muudzame dambudziko; vanoti zviri kupa kukanganisa, kworudzii Internet kubatanidza pevara (redhiyo, gvt, …). Cherechedza kuti mune Filezilla ane Log. pasina izvi, zvakaoma rubatsiro, nekuti ndakaita kugadzwa ichi pamusoro vakawanda michina uye zvinoshanda, zvechokwadi. akataura!
20 Chivabvu 2013 kuti 20:00
wedzera kuti padzinoenzaniswa mukova 2100 kuburikidza panzvimbo http://www.t1shopper.com Chaioneka shoko iri:
-187.11.104.198 ari kuteerera pamusoro chengarava 2100 (amiganetfs).
chii Ndinotenda zviri kunaka kwakarurama kubatana?
18 Ndira 2011 kuti 0:20
Oi, Izvi zvinoreva kuti suo yakazarukira Modem wako / router, asi vanofanira kusimbisa kuti “Virtual Server” (Nat) Muri kuendeswa kombiyuta yako IP apo Filezilla Server iri yakaiswa. Ndaona vamwe vanhu vane matambudziko kana unobatanidza kubva kunze (Internet) mukati (Lan), nokuti pasina kuziva nzira kaviri… Zviri kuti dzimwe modems vari zvakare routers, ipapo, muchiitiko ichi, Unofanira kugadzira zvose Nat, mune mamwe mazwi, itai Modem ADSL (riri router) uye router (kazhinji Wireless). mumwe kuita, It is kugadzira ari ADSL Modem kuti basa zambuko muoti (Bridge), kuita rakananga chokubuda kare ADSL muoti uye vanoenda Wireless router, kuti kunyange ndiye anofanira kupedza vachiita pppoe authentication pamwe opareta. akataura, t +
19 Ndira 2011 kuti 19:59
Marcelo Chamorro Avendaño akati:
kuvonga Taylor, Ndakanga dambudziko pusa kubatana, ndobva tariro huru tinogona kugoverana pfungwa dzakawanda, kuvonga
22 Kukadzi 2011 kuti 20:38
Ola Taylor, yakanaka tuto. Asi not'm kuwana zvabudiswa, qdo kuwana kubva shoko hamuna Q mvumo muna forodha. Q being'm kuudza munhu forodha Q kare kushandisa pamahwindo. Ja akaedza Q uzivewo kusunungurwa folders, Handikwanisi kuwana micro qlqr shoma ftp. Chokwadi chinhu vasara kuita!! It ane rubatsiro?
7 Kurume 2011 kuti 11:52
Oi, kutanga unofanira kuedza zvekwaunogara, mune mamwe mazwi, kuti pazviruva sezvo Article, zarurai browser uye kutaipa: ftp://127.0.0.1:2100 kana ftp://localhost:2100, asi chokwadi, Ndaishandisa mukova 2100, Kuchinja ikoko kana zvakakodzera. No kudiwa mugove forodha kubudikidza Windows! Just kupa mvumo nokuti ftp pachake. Chimwe chinokosha ndechokuti kusunungura Firewall zvose zvengarava rakashandiswa ftp. Ndaishandisa mukova 2100 (kune mirayiro okufambisa) uye 2101 (nokuti date hill). Kana musingadi kuregedzera Firewall, hazvina kumboshanda. Edza zvakare, danho nedanho, chaizvo sezvakunoitwa Article. Zvino mushure iwe uchinje ako. zvakanaka, achimhanya zvekwaunogara, unofanira kuedza, mune mamwe mazwi, Internet. muchiitiko ichi, kutevera Mazano Article, verenga zvakataurwa nevamwe vake, kuti zvose zvinoshanda kubva, OK? Thanks!
8 Kurume 2011 kuti 9:33
Ndiri vakaedza pamusoro 50x chero chakaipa ichi, Hazvina dzapwa kufanana naNehumi. Ndinofunga kuti kuvhara kuti ADSL rangu NET zvavo. inodonha certinho, Ndinoshandisa hapana-Rinozvikudza ip asi kwete zvakananga kuda. Kunyange ngaavongwe nokuti tuto. ndotenda zvikuru. akataura
16 Kurume 2011 kuti 17:27
Edza Disable antivirus uye firewall kungoona kana yacho inotsidza mumwoyo… yeuka unofanira kusunungura maviri ftp zviteshi: 20 E 21 (kana munhu nepfambi ndaisa mu FileZilla, sezvo 2100 kana 2101). Mamwe mashoko ari kuti FileZilla ane Onawo apo nepfambi anogona kutarisa zvichibvira matambudziko akanyorwa.
31 Kurume 2011 kuti 17:02
muedzo, I kuiona, kusarudzwa chete kusarudza Shandisa IP Kutevera pusa muoti setings. ikozvino enda!! kumbundira!
16 Kurume 2011 kuti 17:43
Tinotenda kukurukura dambudziko iwe nemamiriro! It Vachashumira vamwe, Falouuu…
16 Kurume 2011 kuti 18:51
Ndidzidzisei vanotarisana router wangu Zinwell ZPlus G880!
Access munharaunda nomukombiyuta IP ndakasarudza mumidziyo rangu kadhi, kusanganisira kuwana Via wirelass zvakare, Handina kuedzwa kuwana kunze samambure yangu maitirwo sedzataurwa.
Chii Ndaida yaiva kuwana kuburikidza wehondo akaita hapana-Rinozvikudza ip vari 2 asi kana ini kutaipa ikoko ence ftp://name.hosts:8221 yokupedzisira ndiyo chiteshi chengarava configured pamusoro Server filezilla sezvinoratidzwa.
11 Chikumi 2011 kuti 19:46
Rafael FREIRE FARIAS akati:
Akatarira akaisa chinhu mumunda nokuti anobvunza Rinozvikudza ip
24 Chikumi 2013 kuti 14:09
Taylor, Vongai nokuti tute zvakanakisisa Ndakaona pamambure, zvakawanda kana yangu achiri havagoni kumhanya ari kunze; kazhinji rinoshanda localhost pamusoro paIndaneti chinhu, akaita zvakataurwa Melial akati akavandudzika zvishoma akabvunza Username uye pasiwedhi haina akapinda zvakawanda. nyaya yangu zvinotevera ndine waya Indaneti kuti anosunungurwa parutivi rwomumbure kadhi mac pumpkin, Ini kushandisa wireles router chete waya cofiguraro Wan uye ishandiswe Wireless chiratidzo yangu kwete pakombiyuta yangu uye router Ini Akasunungura mukova uye nechekare spi akanga akaremara.
I tora yakawanda basa iri Ndinokutendai.
30 Kurume 2011 kuti 13:27
Sezvandakataura vamwe kukwira, edza chokukuvadza antivirus uye firewall kungoona kana mumwoyo ... yeuka kuti ane kusunungura maviri ftp zviteshi: 20 E 21 (kana munhu nepfambi ndaisa mu FileZilla, sezvo 2100 kana 2101). Mamwe mashoko ari kuti FileZilla ane Onawo apo nepfambi anogona kutarisa zvichibvira matambudziko akanyorwa.
31 Kurume 2011 kuti 17:03
Handizivi kupi asipo asi chokwadi ndechokuti kare shomanana filezilla Server kuti akaita kubatana anofa, pasingaverengwi akaramba kupinda kunze samambure yangu.
Ndine antivirus Panda Global Protection uye router wangu GTS Telecom AP Super Power, I akatevera zvose kuti tsamba ari tuto shamwari yedu uye vasina kubudirira saka kure!
Zvinganaka hameno kana munhu angandibatsira chakabatsira configuration nokuchengeta antiviris angu wirelass uye redhiyo yambotaurwa nekuti kana ini kutevera nzira sezvinorondedzerwa Blog ino Ndichavaka rova ​​Zvirokwazvo pamatanho kutevera kwazvo nyore asi, kunyange munhuwo zvake sezvo ndini chokwadi ndechokuti ndikarega kukurangarira ndichiri idzivirirwe pamwe antivirus yangu asi ndiri kunetseka kuti vasingakwanisi kuwana ftp yangu externally.
20 Kubvumbi 2011 kuti 4:00
The dzinoenda kudzima antivirus rinongova kuona kana iye rakavhara ftp kubatana. kana iye, unofanira kutarira mauri vamwe pazvinoita kuti zvabudiswa ari ftp kushanda kana chengarava, asi sei kuita izvi kunogona siyana neimwe antivirus. saka, Hazvisi kuva pasina antivirus, izvi zvakakodzera chete kuwana chikonzero dambudziko!
Kana kushandisa Internet Radio, Saka basa kunze kunogona kuva dambudziko kuti yave dzinokurukurwa. ndapota, tora Ngatitarise:
Chokwadi ndechokuti pakutanga unofanira ftp private mutumwa basa munharaunda. Zvadaro hongu zviri configured kumhanya paIndaneti. Izvi zvinobatsira kuziva matambudziko mumatanho. Ah, munhu wandaiziva Hamubvumirwi nayo kuti basa, Aifanira kushandisa pfungwa Filezilla Shandisa IP Kutevera pusa muoti marongero. edza pano…
I tora mukana uyu kuti vamwe vaaishanda navo kuti kupindura mimwe mibvunzo iwe zvaitwa ne e-mail:
Yemanyorero ari Nat zvinoitwa ne vainzi kupfuma “Virtual Server” E “Port vorega”, riri zvikuru chinhu pane kuchinjwa mazano Data rukova kuti kombiyuta akapiwa yakavakirwa IP wako uye Port. First dzemo ftp kubatana anofanira kuva funcinando 127.0.0.0, sezvo imi makati ngaarumbidzwe OK. Saka zvinoita sokuti chinoshayikwa chete iwe wakaisa Nat. Fungidzira iwe kuita ftp chikumbiro ichibva Internet (Somuenzaniso, kushandisa Rinozvikudza ip kuti rinowanika http://meuip.info). Zvakaratidza kuti chikumbiro ichi achauya router wako, kuti ndiye akabata IP zvokuti rinooneka http://meuip.info. zvakanaka, napashure, router yako zvauchataura apo kutumira chikumbiro ichi. izvozvo (router) gotta kuziva kuti pose muwane chikumbiro (sevhisi) pamusuo 21 (kana 2100, kana munhu anenge runotsanangurwa), Unofanira kutumira kuerera kuti muchina ndechokuti yakaiswa filezilla (ftp Server). Kutadza kuita kudaro, haaiti basa!
The updater hapana-Rinozvikudza ip kana dyndns chinhu-software kuti unofanira gadza pamusoro muchina uyu apo filezilla kana kushandisa DDNS sarudzo router yako, rutsigiro nyaya. updater Izvi nguva nenguva kuona kana yako IP inopisa (IP Internet, nomumwe rinowanikwa http://meuip.info) It haana kuchinja.
Tomboti soumambo yako ftp://gilmar.dyndns.org:2100. Kana iwe kutaipa kuva Browser wako kero bhaa, Rinotanga chikumbiro kuna domai mu mubvunzo, kushamisika uyo dyndns.org. Kusvika panguva dyndns, Unenge kubvunza, izvo kosha IP gilmar. kosha IP uridzi, iro nekugadzirwa updater yako, ipapo requisão inoendeswa midziyo ane IP ichi. With akaudza, Anowana IP iri musha wako router (kana Q VC batanidza PC wako zvakananga paIndaneti, paizova micro vake vaizova IP). Pavakasvika pamusoro router, Iye muchakumbira, Ndinotuma chikumbiro ichi kuna ani kusvika pa chengarava 2100? Izvi ndipo Nat yako, nokuti ndiye achaita kubatanidza ftp webasa chengarava (izvo kana yenyu 2100) nepfungwa yokuti muchina ane ftp Server kumhanya. pachena, muchina uyu vachafanira kuva FIXED IP, vamwe mhando 192.168.0.10. Tarisa paIndaneti sezvo seti wakaiswa IP, hapana chakavanzika.
22 Kubvumbi 2011 kuti 9:10
Ndakaverenga kudzokorora pano: Shandisa zvinotevera IP in pusa muoti setings!
Izvi kugadzirisa zvose kwandiri kunze kuwana?
23 Kubvumbi 2011 kuti 18:52
Handizivi, edza kuona. Kana yangu, kwete zvinodiwa…
23 Kubvumbi 2011 kuti 20:06
dofabricante akagamuchira yangu router GTSTelecom:
IP kugadzirisa epamba richikurukura Ishe saka iwe enda Advanced Settings / Lan,
uye akakudzvinya vari kugadzirisa DHCP, Dzinoita Mac akaisa yeGmail.END_STRONG wacho Mac uye IP IP kuti kugamuchira, uye muchisviniro Shandisa, nzira iyi inofanira kuitwa nomumwe nemhosva pamusoro pomumbure.
Kuti uyu angava mhinduro kupinda uye mbudo Data uye ftp wangu kupindamo externally?
23 Kubvumbi 2011 kuti 19:23
Kutaura chokwadi iwe chete unofanira kusiya kombiyuta yakatarwa IP inova achimhanya Filezilla. Izvi zvinogona kuitwa zvakananga pamusoro kombiyuta (inokurudzirwa) kana router, sezvinoratidzwa Router Support. muchiitiko ichi, pose kombiyuta yako richibatanidza kuna Router, izvozvo anoona kuti Mac uye ibasa chete IP rawakafunga.
Izvi haisi mhinduro, Ndizvo chikamu chemhinduro. Ndinofunga Ndichiri haana chaizvo kunzwisisa simba sei kuna Nat. Asi zvakadaro zvakanaka, kuti nokukurumidza zvinhu zvose chakagadziriswa…
23 Kubvumbi 2011 kuti 20:05
Ndakapiwa mhinduro iyi asi havazivi kupi kuenda zvino nokuti handizivi zvokuita kuti IP vangu ngadzirambe IP rangu dzomunzvimbo Network 192.168.1.4
kushanda pakuvheneka zvengarava pamusoro 200.171.76.8
200.171.76.8 Iye haasi kupindura pamusoro chengarava 2100 (amiganetfs).
23 Kubvumbi 2011 kuti 19:52
Kana usiri kupindura pamukova 2100 Imhaka yokuti router yako haina configured (Nat).
The router anofanira kugamuchira Internet kosha IP! Check izvi kwemaonerwo Router Configuration peji, kuona zvaari achitora zvekunze IP (Zvinofanira KUSHANDA). Kana router wako haasi kugamuchira musoro IP, Hazvina kunge nei Internet yako Via Radio (kosha IP wenyu vaiita nokuda Provider: Kuchava runonyengera!!!) kana nokuda kwenyu ADSL Modem rinogonawo kuva router, mune mamwe mazwi, iye otora IP kero, uye anotumira IP chando pamusoro Router wako (chitsamba kuti kungova 2 routings), zvisina inowanikwa pamwe Internet Network.
Kana uri kuisa zvachose panyaya, I hunoratidza kutora vachinzvera on Google pamusoro Nat, Valid IP, Networks kana kudana chero mukoti kuti rubatsiro, kana kwete , inogona kurwadza.
23 Kubvumbi 2011 kuti 20:16
Sei pamusoro TC maminitsi mashoma pamusoro MSN uye kupa nechimwe TC kuisa pano vamwe duvidos vanoshandisa akafanana neni kuti akubatsire kugadzirisa matambudziko chete kuti I chiso, Ndinogona kukutuma 3 Prints yangu GTS Super Power AP wangu DSLink 200E pamwechete neminda Ndiri compicado vanogurukuta Nat, IP vemo?
Zvirokwazvo tine adsl Modem router kuti inofanira kuva kambani uye domelo ndiyo 200e DSLink atova wirelass router wangu GTS Super Power AP.
Ini chete akasika No-IP yakaiswa purogiramu pano muchina apo FileZilla Server asi kwete akamuka kuwana achazoburuka ichi, asi chete IP ndakaisa faustino.zapto.org pachangu 192.168.1.200 uye mukova 2100.
Unofanira kuisa munda akasununguka FileZilla kana chinhu?
23 Kubvumbi 2011 kuti 20:58
Fixei IP 192.168.1.41 ari GTS Super Power AP configured UDP TCP IP pamwe kuti zvimwe mikova 2100 E 2101 umambo muna No-IP ndiye faustino.zapto.org asi zvinosuruvarisa zvakadaro haana kuwana ichi nzvimbo asi IP kuti ibasa ngadzirambe ini chete nemakanzuru.
Chii Ndichiri vasara kuita?
Ndinobvuma Handizivi chinhu, Ndinogona kubhadhara iwe neni kana ukabatsira!
26 Kubvumbi 2011 kuti 2:48
mhoro Gilmar, Chaizvoizvo une simba haasi mapfumo… vakomana kombiyuta kuti ndinoziva nguva dzose zvakanaka ane shungu ichi… kutanga, I Hazvibhadharisi chinhu rubatsiro, chete kuti tisapfurikidze pamusoro singi kuti rutsigiro nokuti rudzi chinhu kuti nzvimbo anokurumidza wenguva kunze dambudziko, asi ari kure ndiyo rakaoma uye nguva pakuzadza…
ndokubva, komuredhi, saka Ini pfungwa zvimwe zvekushandisa Kutarira ipapo pedyo nekwaunogara… zvakanaka, Ndichaita kudzokorora zvimwe zvinhu, avhenekere…
Chaunotanga kuita kuziva dambudziko, nokuti ichi, kuitawo:
(1) O ftp kumhanya munharaunda (127.0.0.1); Kana asingadi kushanda panzvimbo, hazvina kumboshanda kure. Kuti bvunzo yacho, zarurai browser uye kutaipa mu zvakafanana ftp://127.0.0.1:2100.
(2) Ona kana router yako anogamuchira kosha IP Internet (Kana internet kwenyu rinobatsirwa iwayo redhiyo, saka complicating, nokuti paine IP kwete kwauri, asi akaudzawo nezvimwe vatengi). Just kupinda router configuration peji, Kazhinji Status Tab, uchaziva une musoro IP. IP ichi kuti rinooneka pamusoro router anofanira kuva zvakafanana IP inooneka kana iwe kuwana nzvimbo http://meuip.info/ (Izvi zvakadaro musoro IP);
(3) Kana une ADSL Modem, iva nechokwadi chokuti Modem haasi uyo kuwana chikonzero IP. Saizvozvowo, chete kupinda Modem configuration peji, Kazhinji Status Tab, uchaziva une musoro IP;
OBS: Kuti vazive kuti paine IP? pindura: Zviri IP ichi kuti kuchaita kubatanidza kubva kunze (Indaneti) mukati. Kana hamugamuchiri kushanda IP pamusoro router kana Modem ADSL, uyo zvichida kukupa Indaneti iri kushandisa IP akagoverana nevamwe vatengi, ipapo, hazvina kumboshanda!
(4) Ngwarira kuti unofanira kuva ndechokuti kana yenyu ADSL Modem vaya kugamuchira kosha IP, unofanira kupinda setup uye mashizha payo zambuko muoti (Bridge), saka, kuerera rose mashoko kuti, Muchaiswa kuendeswa router wako, kuti ndiani kuti kunyange paine IP. muchiitiko ichi, uchafanira tsvagurudza ADSL yako router, uye kwete ADSL Modem (nekuti zvichaita chete kutyaira). In yangu DLink router iwe kugadzira kubatana kuti aizova Modem iri Setup> Internet> Internet Connection Manual Options> Internet Connection Type> My Internet Connection iri : PPPoE (Username / Password).
(5) pakupedzisira, Unofanira Nat nemazvo, configuring router rako kuteerera pamusoro chengarava 2100 (kana ftp yako) nokupfuudza router nokuyerera kuti muchina wako apo Filezilla.
12 Chikumi 2011 kuti 10:41
Ndinotarisa pano zvakare…Ndiri kuramba uye ndine kuwana, vamwe zvinogona sei handina…?
Zvakaoma asi kukwanisa kana chiri chokupedzisira chinhu ndasvika pano.
Ini Akaremara antivirus Panda Global Protection 2011 uye firewall yako uye ndichiri akaramba achitora ngowani yangu pamusoro ftp!
GTS pamusoro router yangu ndakawana mamwe parameters asi kwete chindipa…
ivo: DynDNS Kurongwa vachikumbira soumambo zita, Username uye pasiwedhi
Akatevera akaita Gwaro vachikumbira IP-Host kero
Anogona kundibatsira pakutsvaka itsva iyi chingapedza ftp wangu waipedza kwangu Panda antivirus ikabereka hapana?
26 Kubvumbi 2011 kuti 5:07
The chete Ndichiri havanzwisisi ndechokuti ndine 2 wehondo No-IP kuti inofanira kuva…
Good chinoitika ndaisagona kuwana ftp yangu Server mune imwe nzvimbo
Ini akamisa faira Server pamwe zviteshi 8221 8222 TCP / UDP I ngadzirambe IP wangu pamusoro wangu yomunzvimbo rezvebonde vachifamba router uye akaita zvose zvakanaka sezvo mutemo unoti asi chokwadi ndechokuti handigoni kuwana yangu ftp filezilla Server panguva hondo yangu pasina-Rinozvikudza ip, asi chete pamwe IP ndakasarudza pano picnic, Handina kunzwisisa chinhu!!!
Ndinofunga shoma vakandishaiwa kuwana zvinodhura…By zinga rubatsiro ini!!!
11 Chikumi 2011 kuti 19:39
Umambo No-IP kana DynDNS haisi chinonyanya kukosha. inotongwa Izvi zvichaita chete kubatsira mushure kuwana ftp kwenyu kushanda IP kushanda. inotongwa ichi No-IP uye DynDNS anoratidza dzenyu nechikonzero IP chete nguva dzose anochinja, saka chikonzero zita (Dominoes) zvichinakidza, sezvo haachinji. Ftp Your Achashanda anowanzoita pasina No-IP kana DynDNS, chero bedzi imi munoziva chii paine IP kuti pari kushandiswa ne muchina wako (kana router). Somuenzaniso, vanozvitutumadza Rinozvikudza ip wako chinoshanda 189.75.34.242, ipapo kuwana ftp yako ftp://seuUsuario@189.75.34.242:2100, Uchava ishande kuitiswa. Your seanoshanda IP chinogona kuoneka nzvimbo iyi: http://meuip.info/.
Kunenge kuti dambudziko rako riri paine IP nyaya. Ndinofunga hauna kunzwisisa musiyano paine IP uye chando IP. achitsanangura grotesquely, paine IP ndiye IP unokwanisa kubva Mutekenyi worunhare (DSL, dhayira Up, nezvimwewo). Ndizvo naye kuti iwe uwane Indaneti uye inogona Zvinyorwa zvakasiyana nzira pamusoro pose padandemutande. IP atova chando, ndiye IP muchina wako anowana mumidziyo yenyu, Kazhinji basa ne router (DHCP). kutonhora hahuna muna IP Internet, chete mumidziyo yenyu! Kana uchida kudzidza zvakawanda pamusoro ichi, ita tsvakiridzo, nekuti paIndaneti uchawana chando IP neeSultan. Pane uchaona kuti ive IP 192.168.0.1 (masiki 255.255.255.0) Kunotonhora uye, pachena, kana router kwenyu kuri Cold IP, haana kunyange kuenda kukwanisa kutaura Internet.
saka, unofanira kutanga kuona kana router wenyu kuwana chikonzero IP. Just kupinda router configuration peji, Kazhinji Status Tab, uchaziva une musoro IP. IP ichi kuti rinooneka pamusoro router anofanira kuva zvakafanana IP inooneka kana iwe kuwana nzvimbo http://meuip.info/ (Izvi zvakadaro musoro IP). Kana IPs havasi zvakafanana, hazvina kumboshanda. Zvino unofanira kuona kana munhu anopa iwe Internet, zvechokwadi forncendo uri musoro IP. It mune izvi internets redhiyo ivo kuudza paine IP, uye anopa chando IP (lascou!). Chimwe chinhu zvinowanisa Dambudziko urwu kana uri hwokutiparadza kaviri, ine ADSL Modem router riri kare, mune mamwe mazwi, chiratidzo ADSL Indaneti anouya Modem / router uye ipapo anoenda router (Wireless kana kwete). muchiitiko ichi, Ini pfungwa iwe kugadzira Modem yako / router (anotanga anogamuchira Internet chiratidzo) kuti basa zambuko muoti (Bridge), iyi nzira kuerera uye paine IP Internet anoenda zvose wako Wireless router, chiri apo kunyange unofanira kugadzira authentication pamwe Provider wako (BRTurbo, Oi, UOL, nezvimwewo).
12 Chikumi 2011 kuti 11:14
Today Ndakaona yangu kushanda IP ndiyo nguva 189.18.19.252 kana ini kunzwisisa chikonzero IP ndiko ISP wangu anondipa zvakanaka?
Ini ngadzirambe IP wangu pano 192.168.2.200.
I tevera chii nepfambi asingandirayiridzi ftp://gilzinho.zapto.org@189.18.19.252:2100 uye akanga asina, asi ftp://gilzinho.zapto.org@192.168.2.200:2100 Zvakange pano haana chete zvekunze.
Ndakaita bvunzo pano Simple Port vorega uye vakakundikana vose mikova 2100 sezvo 2101 Ndikagadza faira zilla
Zvino kuti a aitaura pamusoro dsl Modem router ndiyo Modem rangu pano ari DSL 500B itsva chizvarwa linked!
Ndine kusunungura paro protocols, ichava mhaka kukundikana yangu?
Chii protocols izvi dai wangu DSL 500B mukuru chikonzero?
13 Chikumi 2011 kuti 5:31
Recreational chinoitika kana isu kusiya zvose mabhokisi achiongorora panguva isu kusarudzwa folder kuti ticharamba mukuita FileZilla Server?
How kurambidza mafaira kuti semuenzaniso kwete Edit kana vanodzinga nayo zvetsaona?
11 Chikumi 2011 kuti 19:55
Ndapinda DSL yangu Modem 500 B idzva DLink asi akawana Nat kunyange kana ndakanga ndisingaendi kushandisa Modem yangu kufamba asi wirelass router saka ndinofunga kuti mu Bridge rudzi uye kwete necessáro Mecher asi ari firewall pakombiyuta yangu uye kuti ini vakawedzera mikova 2100 E 2101 FileZilla nokuti ftp uye akasika vanofunga 5 zvengarava pamwe chete chinangwa 2100 E 2101, Ndava kupenga nezvakawanda mhingaidzo asi ndine kuti nokuti munhu wose anogona zvino haagoni ini akanomira…kuti mushonga!!!
13 Chikumi 2011 kuti 5:47
Saka Ndanga mambure Via redhiyo uye redhiyo yangu nemhosva da sezvo simba Rinozvikudza ip ndikaisa Rinozvikudza ip Q iri mupe zvikuru kuwana Rinozvikudza ip kwete Internet.
Zvichaitwa nomunyika Server Via redhiyo yangu Zvatinoda?
chii chandingaita kuti kukwanisa kuisa yangu paIndaneti ftp?
plixx mumwe rubatsiro ini
24 Chikumi 2011 kuti 23:21
Hello tsvimbo sezvo vose vari?
Ndiri kunyora zvinhu izvi kuti kukumbira mamwe mazano.
Ndaigona kumisa filezilla yangu Server zvinobudirira 3 mazuva pasina matambudziko chii ndichiri kuziva ndingayananisira upenyu nyore vaya vanoita dawnload Server yangu nokuti vanoti kunyange pane apo Broadband iri rakaisvonaka Download kubva Server yangu filezilla anopa pamwero yakaderera chaizvo.
mukoma wangu muPortugal kukopa faira kubva Server yangu filezilla 200MB pamwero wenyika 28kbp / S kuva ikoko kuti neboka rake 20MB!
Pano pasi Server yangu Broadband wangu 2MB!
Anogona kuwedzera mwero kwaari kana dambudziko haisi Server yangu filezilla?
Kamwe ndine mhinduro iri Ndichavaka kuposita zvose zvakaitika rangu kunyange vakakwanisa kuita kwangu filezilla basa nokuti zvakanga zvakandiomera asi ndakakwanisa tichibatsirwa Taylor Lopes ndiye mhuka!!!
Ndinoda kudzidza uyewo sei kupedza chete vanhu vanoita kukopa uye hapana zvakawanda uye pave zvakawanda vanoishandisa kugovera mafaira yakasiyana-siyana mushandisi.
1 Chikunguru 2011 kuti 2:12
Instalei filezzila Server hapana kuhwina 7 64 matomu
Free sezvo portas 2100 E 2101 mu firewall uye router direncionando zvakafanana zvinofanira kuitwa.
Regai batanidza ndonda nzira
Ini ndakaita kubatana bvunzo nzvimbo yakaratidzwa filezilla FAQ http://ftptest.net/
Zvinoratidza kuti zvakanaka
Makorokoto! Server yako kushanda uye Assorted routers / firewalls vave zvakarurama configured nokuda pachena zvinhu ftp.
Sunungukai kuedza mumwe servers dzako nokupinda ayo mashoko pazasi.
Pandaiva kutaipa changu-Rinozvikudza ip:2100 haangamiri
Haukwanisi kuratidza peji
The mudziyo kana kure chinogona haangatenderi kubvuma kubatana
router wangu ApRouter WR 254HT
Ini ndakagadza mumwe muchina musi Win XP uye anoshanda miganhu pamwe chete pazviruva ndakaisa mu zvisamumirira 7
Mirira kubatsirana zvose.
30 Chikunguru 2011 kuti 11:27
Claudio - CRS Computer akati:
'Re achimhanya tonhorera kunyange!!!
Ndakapedza mazuva maviri kutsvaka chingapedza dambudziko rangu omunzvimbo chinja. Shandisa dzeko Server EasyPHP 5.3.6.0 kusika padandemutande mapeji uye haana chizvarwa Server. Ndaifanira kupa mvumo mune dzimwe folders uye yenyu romukova akandibatsira chaizvo, akatotaurwa varambe basa rangu. Tava kusvika kurega dingindira.
Thanks! Ramba inotungamirira vamwe vedu!
Claudio – Nampula-Pe
1 Gunyana 2011 kuti 15:45
Chiri Claudio – Nampula-Pe zvakare. nzira, chete kukufunga kuisa chombo kugovana mapikicha. Ndingadai ugozvitumira dzangu http://twitter.com/#/CrsInformatica.
1 Gunyana 2011 kuti 15:49
mhoro Claudio, ndatenda. Pane pakuguma pambiru ane Link rinonzi “buritsa”, iro rinopindura mugove. Zvechokwadi hakusi vanooneka, Ndinovimba kuvandudza nayo… kumbundirana!
1 Gunyana 2011 kuti 17:18
Pane nguva kuti ndakanga achiomerwa kuisa ftp yangu mudenga. With Blog renyu dambudziko rangu yakatanga chakagadziriswa. ndatenda!
22 Gunyana 2011 kuti 10:33
Renata Gomes akati:
mhuka kwandiri dambudziko kana angandibatsira Ndinoonga
kuwana zvimwe nechomukati externally haana kuverenga zvose mhinduro kugona kuisa chinhu
kuti chimiro ndiye wangu nokukurumidza kubatwa 510 pamwe internet mhoro chiratidzo
kare I configured chiteshi chengarava 21 E 20 ipapo nhaka ftp Server configured akabva ashandisa
Handizivi zvandiri kuita zvakaipa
faiz ane mwedzi mumwe kusaora musoro
aigona kuzarura mamwe masuo
kare I Akaongorora mikova kuzarura uye chiteshi nzvimbo
uye zvinoita sokuti kuzarura musuo 21 uye mukova 20 tBM
he rubatsiro ini mhuka
29 Gunyana 2011 kuti 4:42
Oi, Ndinokukurudzirai kuti kutevera nokutendeka nyaya marongero, yatova kuongororwa uye kakawanda I, Legal basa. saka, regai kushandisa ftp default chengarava 20, kwete 21. Ini chete kuita mashoko pazasi kuti zvinogona kukushandira, kutarira 6 Gumiguru 2011 kuti 20:44. rombo rakanaka!
6 Gumiguru 2011 kuti 20:49
Ndiri kare touting zvose Aki hehehhe
More rubatsiro ini kufadza Ai
29 Gunyana 2011 kuti 4:46
akapindura pamusoro! T +
Ivanberg Moreira akati:
Ndaifanira pagomo imwe ftp Server kubasa, uye ndakaedza zvimwe pazviruva. kukundikana, Ini ndaiswa kuuya yenyu romukova. nenzira, zvakanaka kwazvo.
tsime, kuenda matambudziko angu, Ndinovimba rubatsiro ini.
1. Downloaded, akagadzawo uye configured FileZilla, zvose zvakanaka!
2. configured Firewall, zvose zvakanaka!
3. Configured Modem / Router, zvose zvakanaka!
4. I kuedzwe zvekwaunogara, zvose zvakanaka!
5. No-akasika IP kero, zvose zvakanaka!
6. Pingo No-IP kero, zvose zvakanaka!
7. I akaedzwa Via internet, NOT basa.
ipapo, hondo yakatanga:
8. I vakaremara antivirus uye firewall. I akaedza Nzvimbo: zvose zvakanaka! I kuedzwe zvekunze: hapana!
9. Ndakaita Tester Online ftp nzvimbo bvunzo, anowana, matanda, asi, kwete zvakazara, vakaramba Eh, uye mugumisiro yakanga iri:
mhosho: Server akadzoka unroutable private IP kero PASV mhinduro
Ita chokwadi kuti Server iri configured kubvumira pusa muoti kwokubatana.
Kana Server iri kuseri Nat router, iva nechokwadi chokuti Server anoziva ayo IP kero zvekunze.
Kuwanda zvengarava zvinoshandiswa pusa muoti anofanira kuvhurwa mune zvose zvinobatanidzwa firewalls.
Kuwanda zvengarava zvinoshandiswa pusa nzira inofanira dzatumira vose vachibatanidzwa Nat routers.
Edza uninstalling firewalls zvose uye chivhariso kombiyuta yako zvakananga kupinda Modem yenyu, nokudaro pavaigona kutora chikepe chaienda ari router.
Handina kuwana mukana wokusarudza FileZilla: “Shandisa zvinotevera IP in pusa muoti setings!” . Shandisai mhando 0.9.39
Q Eh kuziva chinhu ari Modem / Router, muenzaniso H mumwe D-Link DSL-2640T, kana kuti bhidha “IP muna pusa muoti”
Tevera Links kuna Modem sefa, kundibatsira, kana zvinoshanda:
mufananidzo 01 – http://www.comarket.com.br/downloads/tela-modem-01.png
mufananidzo 02 – http://www.comarket.com.br/downloads/tela-modem-02.png
Ndinokutendai dzako. zvakare, makorokoto, Q Mbiru dzose kuedzwe, ake akanga inonyatsobudirira.
Ndinongova iyoyo shoma dambudziko. Ndiri kumirira zano, mhinduro…
4 Gumiguru 2011 kuti 21:15
VaGumbo yapfuura shoko:
Ndakaita muedzo kuti mikova – http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/
Kushanda pakuvheneka zvengarava pamusoro 187.40.176.111
187.40.176.111 ari kuteerera pamusoro chengarava 2100 (amiganetfs).
187.40.176.111 haasi kuteerera pamusoro chengarava 2101 (rtcm-sc104).
Ndinongova iyoyo shoma dambudziko. Ndiri kumirira zano, mhinduro ...
4 Gumiguru 2011 kuti 21:28
Oi, runako, zvinogona kuita nomumwe izvi zvitatu zvingangoitika:
(1) Chimwe chinokosha ndechokuti kusunungura Firewall zvose zvengarava rakashandiswa ftp. Ndaishandisa mukova 2100 (kune mirayiro okufambisa) uye 2101 (nokuti date hill). Kana musingadi kuregedzera Firewall, hazvina kumboshanda. kudzokorora: Kusunungura date chengarava (2101) wo!
(2) Somunhu bhururu akati pamusoro: Gee, I kuiona, kusarudzwa chete kusarudza Shandisa IP Kutevera pusa muoti setings. ikozvino enda!! saka, tsvaka pfungwa iyi filezilla.
(3) kana bvunzo, kushandisa DDNS NO-IP chete kana muri kunze samambure yako. Kana kuita bvunzo vemo, kushandisa chete zvemukati Rinozvikudza ip. Ndakaona mamwe mamiriro ezvinhu (GVT) kuti paakanga achiedza kuwana micro mukati Network yangu, DNS haaiti basa.
6 Gumiguru 2011 kuti 20:44
Tutorial kwazvo Heim bhururu. makorokoto!!!
I akatevera Tutorial yako, Muedzo vemo ichi zvose zvakanaka …
Zvisinei ndichiri zvinetso zvekunze kuwana, Ndichaita kurondedzera pazasi mashoko kuitira kuti kana zvichibvira nepfambi anogona kundibatsira:
Firewall kuita mahwindo:
Error kuwana zvekunze ftp
Obs: On-nzvimbo yokuedzwa, zvose zvakanaka uye vakamhanya … Zvisinei ndine dambudziko iri kuti zvekunze kuwana.
Aigona kuongorora rinodhindira, tarisa kuti ndiri kuita zvakanaka uye rubatsiro ini???
16 Gumiguru 2011 kuti 13:43
Oi Eduardo, edza kutevera kuti Article tsamba… Ndinoziva kuti mumwe ezvinhu anogona kuunza zvinhu zvakasiyana (matambudziko), muchiitiko ichi, Tinofanira kuziva chikonzero. Tanga nokutaura waipedza firewall (chete kuti agumise bvunzo, ipapo muri aitoziva kana firewall configuration nyaya). See Article! Kana dambudziko iri kubva kunze, kana kuri kukundikana firewall configuration kana ari hwokutiparadza, cheki! Chimwe nechimwe Ndakaona zvichiitika kapukanana kuti kana uri mukati Network yako, Unogona chete kuwana uchishandisa veko Rinozvikudza ip (Ex: ftp://10.1.1.2:2100 kana ftp://192.168.0.2:2100… pachena, bvunzo ine IP pamusoro muchina ndechokuti filezilla). Kana uri kunze samambure, mune mamwe mazwi, shamwari kuti imba kana imwe nzvimbo kuti haisi mumidziyo yenyu, ipapo hongu iwe kushandisa DNS (kana paine IP, kana uchiziva). Onawo chii I pakupindura 6 Gumiguru 2011 kuti 20:44 (ona pamusoro). rombo rakanaka!
16 Gumiguru 2011 kuti 15:26
waArifiyosi MANSANI akati:
20 Gumiguru 2011 kuti 9:12
Ola Taylor, Hazvina seguite, Ndakaita zvose zvakanaka zvatsanangurwa, ACECO mukati zvemukati rezvebonde, asi panguva kuidza zvekunze rezvebonde, Ndakaisa IP yangu (yakaitwa) uye zvinoita sokuti loguin bhokisi, asi nerogi anoratidza inotevera Feedback: “425 Haagoni rakavhurika date kubatana.”
My Router ndiye D-kubatana 500B akarakasha, asi iye zvakabatana pabasa GVT zvakananga, nokuti Modem riri zambuko muoti.
kamera wangu Foscam FI8918W (Zviri pamusoro perimwe samambure), kana Ndinoedza akariisa kuvhura ftp, I vanogamuchira zvinotevera Feedback: “Error mu PASV muoti. Ndapota kuva nechokwadi kuti Server rutsigiro PASV muoti”
Ko zvakaipa da?
Ndinoonga kuvafarira uye zvinoita response'll kunyanya kuonga.
28 Gumiguru 2011 kuti 9:40
Opa, sezvandaudza, Ftp anoshandisa zviteshi zviviri: The musuo 21 uye 20. Negore rokutanga uye rechipiri mirayiro anofamba, dhata. Chisingafaniri mubishi dzimwe dzaishandisa, We achinja zvengarava idzi 2100 E 2101, zvichienderana zvakadaro. The chikanganiso iwe wakati, Isingakwanisi kuzarura kubatana kuti mashoko (2101). ndokubva, zvinoita firewall… edza kuita zvakafanana Article yatovapo. Today I akamisa chifananidzo ftp pamusoro muchina pamwe Win 7, kugamuchira Internet GVT uye nokukurumidza 5 maminitsi kubasa (pasina mhamhidzirwa). Asati kushandisa kamera uye vakadaro, kuedza kushandisa kwakajairika nzira (kana Browser Mahwindo aiongorora). On the pusa muoti, ona uko ndaizotaura kubatana mune pusa muoti, apo mumwe mufananidzo une “Pusa muoti Kurongwa”. Ndinokukurudzirai kuti muite nguva dzose kuedza antivirus uye firewall vakaremara, saizvozvo, kana paine blockage, unofanira kuziva dambudziko uye kugadzirisa. Pano ini kushandisa firewall kwakaita (pamwe wakakodzera kunze ftp zviteshi) uye Kaspersky antivirus uye anoshanda zvakanaka. rombo rakanaka!
31 Gumiguru 2011 kuti 17:41
Ola Taylor, Ndiri kushandisa Windows Seven uye ndiri vane dambudziko iroro. Nechekare akaedzwa pamwe firewall uye antivirus nevakaremara asi kwete kuwana zvibereko. It chinobatanidza kuna ftp nhoroondo uye zvose asi passivated uye pashure kukanganisa ichi 425. Ndinovimba mhinduro. kumbundira
23 Ndira 2012 kuti 0:28
Oi Petrus, Unofanira kutevera sezvaakandiudza zvinotsanangurwa. kana zvinoshanda, kugadzirisa zvose zvaakaita, uye kutanga muvare, danho nedanho. Kubva nguva iwe kuchinja chimwe chinhu Implementation chiri Article, ipapo achipfeka mukana kwete basa. Ndinotaura izvi, Nokuti ini ndakagadza filezilla + kunda 7 mu 8 Michina kunzvimbo dzakasiyana-siyana, pamwe dzaishandisa pamusoro Hi uye GVT, asina dambudziko. Ndinoziva kuti mumwe nomumwe nyaya yakasiyana, asi vanotarisa chino! Ndichaita chete nekukuyeudzirai zvinhu zvitatu:
(1) Kugadzira imwe Tela kuita filezilla hapana Muterere “Pusa Mode Settings”, Hazvina vakaenzana Article ( http://taylorlopes.com/wp-content/uploads/2010/10/fz11.png ).
(2) In opareta GVT, Ndakava matambudziko angadaro ari ftp kubva kunze, nokuva pomumbure apo ftp iri yakaiswa. vachitsanangura, kana ari mumwe chete Lan riri achimhanya ftp, shandisa Rinozvikudza ip nokutonhorera Server yako, zvakafanana 192.168.0.21, kubatanidza kwairi; regai kushandisa DDNS (dyndns kana kwete-Rinozvikudza ip)! Asi kana uri panze, mumba kana Internet kweshamwari Datenroku, hongu ipapo shandisa DDNS.
(3) Enda kombiyuta yako vachimhanya ftp basa uye kugadzira nomumbure adapteri kuti wakaiswa IP, sezvo 192.168.1.21. Ona kuti izvi IP ftp Server anofanira wakaiswa, saka unogona kuudza router yako Redirect. Kana usatsungirira, It Inogona kuitika kuti DHCP basa IP richachinja uye redirection Kurongwa nokuda router wako havazotakurwizve achinongedzera wako ftp Server
Kana ukaona kuti dambudziko rako, ndapota kutaura pano, saka kuti vamwe vazive, falouuu…
23 Ndira 2012 kuti 7:52
Ola Taylor, Ini vachaedza Redo nayo. Asi ndisati ndichaita Format ari PC uye Windows reeinstalar. kwete, asi yatova dambudziko rechipiri ndine pamwe PC ichi mumazuva maviri, mumwe aiva kuti firefox tava haana kuwana chete Modem pamwe zvakarurama pasiwedhi. Saka kana iwe kutanga kupa besteirinhas izvi zviri 'chikonzero mahwindo atova frescando. Pandakangopedza kugadzirisa dambudziko, I kuposita pano. Ndinokutendai nokuti nzeve.
23 Ndira 2012 kuti 9:42
Ini mashoko ari PC, akagadzawo zvose nomazvo riripo anoramba kupa kukanganisa 425 kana ftp ari kuedza kuwana externally…
26 Ndira 2012 kuti 4:37
Kana kuwana Via Google Chrome payo:
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (kwete Logged mu) (177.40.224.216)> zvakabatana, kutumira welcome mashoko…
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (kwete Logged mu) (177.40.224.216)> 220-FileZilla Server VERSION 0.9.40 Beta
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (kwete Logged mu) (177.40.224.216)> 220-yakanyorwa Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (kwete Logged mu) (177.40.224.216)> 220 Please kushanya http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (kwete Logged mu) (177.40.224.216)> User arun
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (kwete Logged mu) (177.40.224.216)> 331 Password kunodiwa nokuti arun
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (kwete Logged mu) (177.40.224.216)> Pass **********
(000009)26/01/2012 04:37:29 – arun (177.40.224.216)> 230 Logged pamusoro
(000009)26/01/2012 04:37:29 – arun (177.40.224.216)> Syst
(000009)26/01/2012 04:37:29 – arun (177.40.224.216)> 215 Unix emulated ne FileZilla
(000009)26/01/2012 04:37:29 – arun (177.40.224.216)> PWD
(000009)26/01/2012 04:37:29 – arun (177.40.224.216)> 257 “/” rikaparadzirwa dhairetori.
(000009)26/01/2012 04:37:29 – arun (177.40.224.216)> TYPE I
(000009)26/01/2012 04:37:29 – arun (177.40.224.216)> 200 Mhando wakaiswa kuti I
(000009)26/01/2012 04:37:29 – arun (177.40.224.216)> EPSV
(000009)26/01/2012 04:37:29 – arun (177.40.224.216)> 229 Kupinda vaite pusa Mode (|||2101|)
(000009)26/01/2012 04:37:50 – arun (177.40.224.216)> PASV
(000009)26/01/2012 04:37:50 – arun (177.40.224.216)> 227 Kupinda pusa Mode (192,168,1,2,8,53)
(000009)26/01/2012 04:38:11 – arun (177.40.224.216)> AREGE KUSVUTA
(000009)26/01/2012 04:38:11 – arun (177.40.224.216)> 221 Sara mushe
(000009)26/01/2012 04:38:11 – arun (177.40.224.216)> vasingadiwi.
Kana kuwana Via FiliZilla Client sokuti:
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (kwete Logged mu) (177.40.224.216)> zvakabatana, kutumira welcome mashoko…
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (kwete Logged mu) (177.40.224.216)> 220-FileZilla Server VERSION 0.9.40 Beta
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (kwete Logged mu) (177.40.224.216)> 220-yakanyorwa Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (kwete Logged mu) (177.40.224.216)> 220 Please kushanya http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (kwete Logged mu) (177.40.224.216)> User arun
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (kwete Logged mu) (177.40.224.216)> 331 Password kunodiwa nokuti arun
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (kwete Logged mu) (177.40.224.216)> Pass **********
(000011)26/01/2012 04:39:30 – arun (177.40.224.216)> 230 Logged pamusoro
(000011)26/01/2012 04:39:30 – arun (177.40.224.216)> PWD
(000011)26/01/2012 04:39:30 – arun (177.40.224.216)> 257 “/” rikaparadzirwa dhairetori.
(000011)26/01/2012 04:39:30 – arun (177.40.224.216)> TYPE I
(000011)26/01/2012 04:39:30 – arun (177.40.224.216)> 200 Mhando wakaiswa kuti I
(000011)26/01/2012 04:39:30 – arun (177.40.224.216)> PASV
(000011)26/01/2012 04:39:30 – arun (177.40.224.216)> 227 Kupinda pusa Mode (192,168,1,2,8,53)
(000011)26/01/2012 04:39:30 – arun (177.40.224.216)> MLSD
(000011)26/01/2012 04:39:41 – arun (177.40.224.216)> 425 Haagoni rakavhurika date kubatanidza.
Nechekare I pamuedzo avira uye firewall kure.
26 Ndira 2012 kuti 4:40
Ndakasarudza kutarisana dambudziko!
tava kurasikirwa chete zvakananga chiteshi 2101 wangu womukati IP pamusoro Modem.
Ndakanga chete kutaurirwa 2100 sezvo rinoti iri Tutorial.
26 Ndira 2012 kuti 5:23
Taylor Lopes, ngaavongwe nokuti Tutorial, zvose zvakashanda kunze pano.
Peter, ayo muromo wangu kuponeswa.
13 Kurume 2012 kuti 15:53
zvinotevera…akaita zvose Tutorial CesarFTP, Asi kana zviri kunze kunyange kuwana kana Login zvikumbiro, I kwakaitwa DynDNS…Ndakaisa Wireless router TP-Link TD certinho mikova 21, 2100 E 2101…asi hazvina zvazvakabatsira, Ndakaisa anosiyiwa uye mitemo Windows Firewall uye hapana…Eh maitiro kana Windows Server 2008 R2…chii chinofanira ndinoita, kana iwe unogona vanochera kwandiri kubva pakutanga nokuti ndinofunga mhosva yangu zvingava zvakasiyana kuva Windows Server 2008 uye achaita kupotsa zvimwe configuration…zvakanaka, rubatsiro ini!
31 Gumiguru 2011 kuti 16:52
Opa, muedzo, Windows Server handizivi kana muine peculiarity. Ini handina S.O. ichi. Ndinoziva kuti nhasi ndaifanira kuisa ftp pamusoro muchina pamwe Win7 + Operator GVT uye zvakashanda zvakakwana, Hazvina kutora 5 maminitsi kumisazve. I chikwereti ichi… akataura, kumbundirana!
31 Gumiguru 2011 kuti 17:47
Type Windows 7 Ndizvo zvikuru kufanana Server 2008, Asi vamwe anoshandura kosi AUNGAITA, asi qlqr oudzame anogona kuita musiyano, asi kubva chii Ndakaverenga nhoroondo ave Modem router Q TBM anoshanda cmo, I Uchamugadza, uye zvichida kugadzirisa, ari Modem kubva runhare Q tbm Eh router…Q Eh funga muedzo chete iripo -rs
1 Mbudzi 2011 kuti 23:28
tanga, unofanira bvunzo kubva kunze (Indaneti -> Lan) kana ftp zvengarava anosvinurira. Enter nzvimbo iyi http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/ uye regai mikova (2100 E 2101, kana munhu kuti configured). Kana zvengarava havasi yakazaruka, zvino nei router wako haasi configured sezvinorondedzerwa Article (Nat) kana nekuti samambure wako ane routers maviri. Mukupera nyaya, unofanira kuisa router yokutanga paIndaneti iri zambuko muoti (Bridge), kuti zvakaitika kuerera zvinosvika wechipiri router. Edza kuziva dambudziko… falouuu!
2 Mbudzi 2011 kuti 9:19
Ndicho nemambure ane 2 routers, imwe TP-EMAIL Wireless router uye Modem Telefonica…muchiitiko ichi ndingatarira mberi, kubva yakatarwa maviri kumusoro Virtual Server kusunungura mikova 21, 2100 E 2101?
3 Mbudzi 2011 kuti 8:12
Taylor, Ndakanga kuenda kukubvunza…O Modem da CM Rinozvikudza ip 192.168.1.1 uye Wireless router 192.168.0.1 uye saka chiteshi ichi makombiyuta msm subnet sezvo Wireless router…ari Modem rokuchinja ichi subnet 192.168.1.x?
8 Mbudzi 2011 kuti 12:31
mhoro Levy, hapana simba… uyezve, Zvakaita sezvo zvinoshanda. Somuenzaniso:
The router basa iri chete batanidza emimbure miviri yakasiyana… zvisinei, I vanokurudzira kuti Router anogamuchira kushanda IP paIndaneti (uye kwete chando IP, sapamazuva Example). saka, kuita izvi, zvakanakisisa kubva Modem nokuda Bridge (Bridge), saka kuti yose chokubuda anopinda zviri iri akakunda zvakananga Router, rinotonyanya vaipfuura kuti tsvagurudza (PPPOE) anotevera yenyu Internet Provider.
5 Ndira 2012 kuti 11:09
ndokubva, kunze basa, asi chete Firefox, Handikwanisi kuwana ftp kuti Internet Explorer ndizvo zvinhu, sezvo makasitoma chete kushandisa kureva = /…munoziva ini kuvhura FileZilla ftp Server muna semuna?
23 Ndira 2012 kuti 10:24
Risingazivi kuti pane dambudziko angadaro ari ftp kubudikidza semuna… uyezve, chete edzai pano muna kureva uye Zara atonhodze. Kudanidzira zvinofanira kuitwa tichishandisa ftp dzakati:// (uye kwete http://), zvakafanana ftp://192.168.0.21:2100, apo 192.168.0.21 Ndicho IP wako ftp Server (filezilla) E 2100 ndiye chengarava kuti iwe akamisa FileZilla kumirira ftp kwokubatana. musoro, IP muenzaniso uyu chete anoshanda uri zvemukati Network… kushandisa Internet inofanira asike DDNS, sezvataurwa chinhu.
27 Ndira 2012 kuti 22:22
Fábio Dias akati:
masikati akanaka, Ndinoda kukutendai nokuda Tutorial huru, kucherechedza kuti kanenge pano router wangu Dlink DIR300, ari “tsikidzi” haana kutendera ini bhuku Rinozvikudza ip, aimbova: 192.168.1.140 kuva Server wangu, regai dhcp Rinozvikudza ip kupa WiFi yangu, Ndakaisa Rinozvikudza ip kuti router wandapiwa redirects mukati router (Port foward) uye vakagadzirira, akasarudza, Ndakaita zvose kufanana inoti iri Chinyorwa Friend, uye kubva kukanganisa ichi kuti ane mu DIR300 yangu, akakungurutsira yakanaka. Ndinokutendai zvakare.
30 Mbudzi 2011 kuti 19:50
Oi, ngaivakwe router wacho DHCP configured kune mupei IP ari chaicho bhendi, sezvo semuenzaniso 192.168.1.100 munhu 192.168.0.200. Zvadaro woenda kombiyuta yako vachimhanya ftp basa uye kugadzira nomumbure adapteri kuti wakaiswa IP, sezvo 192.168.1.21. Ona kuti izvi IP ftp Server anofanira wakaiswa, saka unogona kuudza router yako Redirect. Kana usatsungirira, It Inogona kuitika kuti DHCP basa IP richachinja uye redirection Kurongwa nokuda router wako havazotakurwizve achinongedzera wako ftp Server. Falouuu…
5 Ndira 2012 kuti 11:29
Asi chikamu ichi router zvinokosha chaizvoizvo?? Inofanira kuva router kuti kuwana ichi somuenzaniso neimwe ehurumende?? Ini chete achiwana Modem Aki kumba uye nemakanzuru kuwana iri kushanda zvakakwana asi kana Ndinoedza shamwari kumba kunyange funfa kushanda IP kushandisa mambure angu IP haachinji nekuti PC yangu haana anochinja oga Modem kure regai! kana tinogona kuva kurukurirano tsambambozha ndechokuti chaizvoizvo mukana zvebhizimisi zvinangwa zvakadaro.
5 Ndira 2012 kuti 10:48
Pindura pazasi… akataura!
17 Ndira 2012 kuti 8:18
It zvinoenderana… kana uine chete muchina mumwe, chete yakananga batanidza kuti wako ADSL Modem, Haufaniri router. Chinhu chinokosha ndechokuti kuona kana kombiyuta yako iyo anofambisa mashoko ftp Server ari kugamuchira kosha IP. Unofanira kuita kudaidzwa ftp vachishandisa chikonzero IP kuti muchina wako vaakagamuchira (kana zita kusikwa DynDNS kana No-IP), inoudza dzakati (ftp uye kwete http:) uye mukova (21 kana 2100) iwe kuisa yako ftp Server kuteerera. ipapo, pakati Browser uye mhando ftp://seuUsuario@seuIPValido:suaPortaFTP, muenzaniso: ftp://admin@189.75.34.242:2100
5 Ndira 2012 kuti 11:38
Marcos Reis akati:
kukanganisa kana iwe kuzarura forodha ichi musi ftp nechokwadi chokuti nepfambi vane rezinesi Server kuvhura forodha
200 mhando wakaiswa kuti A
421 pum t sika panosangana
Aigona munhu rubatsiro ini chii nzira kutora kukanganisa ichi?
27 Ndira 2012 kuti 0:15
Kugadzira imwe Tela kuita filezilla hapana Muterere "PASSIVE Mode Settings", Hazvina vakaenzana Article ( http://taylorlopes.com/wp-content/uploads/2010/10/fz11.png ). mikova 2100 E 2101 Vanofanira kusunungurwa firewall. Pakupedzisira, ona kana haisi utachiona iri ichivharira (chokukuvadza nayo kwenguva kuti chokwadi). Ita ftp basa munharaunda (ftp://127.0.0.1:2100), uye chete ipapo kuidza Internet kushandisa DDNS uye kunetseka pamusoro kuita zvakarurama redirection pakati zvengarava pamusoro router. Falouuu!
27 Ndira 2012 kuti 23:06
Diego Camargo akati:
Taylor, pembedzo chandagwinyira mukomana uyu, Zviri kuti Tutorial wenyu mukuru, uye ndine chokwadi kuti pano:
“Oi, Izvi zvinoreva kuti suo yakazarukira Modem wako / router, asi vanofanira kusimbisa kuti "Virtual Server" (Nat) Muri kuendeswa kombiyuta yako IP apo Filezilla Server iri yakaiswa. Ndaona vamwe vanhu vane matambudziko kana unobatanidza kubva kunze (Internet) mukati (Lan), nokuti pasina kuziva nzira kaviri ... kuti dzimwe modems vari zvakare routers, ipapo, muchiitiko ichi, Unofanira kugadzira zvose Nat, mune mamwe mazwi, itai Modem ADSL (riri router) uye router (kazhinji Wireless).”
Zviri ini ari complicating, Uso neIkoniyumu Modem Sagemcom F @ ST Router 1704 (GVT), asi vasingagoni kugadzirisa chechipiri, anoita chero vaverengi vako ndakavhiringidza pamwe Modem ichi uye akakwanisa kugadzirisa matambudziko?
27 Ndira 2012 kuti 20:04
zvinotevera, MASHOKO ichi inyevero CHETE nokuda kwevaya ROUTERS MBIRI. Kana nyaya yako, iginowa! Kazhinji tine ADSL Modem uye Wireless router; saka zvakanaka. Dambudziko rinowanikwa kana ichi ADSL Modem router anewo shanda. saka, kudzivisa nzira dua nguva, pakati control panel, zvakafanana http://192.168.1.1 (arun, gvt12345) uye kugadzira kuti Modem kushanda zambuko muoti (Bridge). Asi ziva kuti ichaparara kubatana ayo GVT uye zvichida anorovera ari Wireless Modem / router (kana uine). zvapera izvozvo, ari Modem Achashanda sezvakanga “Bridge” (uye hapana router), replaying Indaneti chiratidzo pamwe chinoshanda IP nokuda router yenyu. Uchava kutsvaga ruzivo pamusoro sei kuti router yako nebasa pave kubatana kusvika GVT, sezvo Modem asisiri achazviita. Somuenzaniso, yangu DLink Router I akamisa kubatana kuti aizova Modem iri Setup> Internet> Internet Connection Manual Options> Internet Connection Type> My Internet Connection iri : PPPoE (Username / Password). In nyaya yako, Handikwanisi kukutaurira. Ngwarira kuti anopedzisira pasina internet…
27 Ndira 2012 kuti 22:55
Peter Henrique akati:
Ndaigona kuita zvose zvakanaka, sezvo akaudza imwe pambiru. Asi ndine dambudziko, kana kuwana kubva kombiyuta yangu kana kombiyuta iri Network yangu, wangu zvekunze IP, kunyange pasina-Rinozvikudza ip, zvose zvakanaka! Asi kana ini kuwana imwe kombiyuta kombiyuta yangu zvinotora kuita uye dzimwe nguva nenguva muganhu yapera kuita donhwe kubatana. Ndakanga vaaita apo kuita download, uye anobatanidza kuti donwload, asi zvino ini handina uye akaramba zvimwechete. Une pfungwa zvingaguma?
28 Ndira 2012 kuti 1:27
Munyaya ino, Ini ndakaita configuration pamusoro pusa muoti chengarava siyana ari chete 2101 (dhata); ichi chaiva mazvokuda, izvozvo hwezvekukurukurirana tsanangudzo uye router configuration (redirection) ja firewall (rusununguko). zvisinei, kune vakawanda mawa kwokubatana, ungafanira kuwedzera ichi chengarava Range pusa muoti, vamwe mhando 2101-2301. pachena, uchava kuti itangezve zvengarava izvi, mhiri ftp (Filezilla), Pamusoro router uye firewall.
A pusa kubatana, kana mutengi anoita kutamira chikumbiro (ftp), ari Server, kuti akamirira (munataisireva) kubatana, Ndiye anoudza nemhosva kuna chengarava humboo achapiwa vakatsinhanisa. chikumbiro ose itsva, kuti Server chinobatanidza kusvika yeGmail.END_STRONG chichishandisa chengarava pakarepo pamusoro, ko kuwedzera siyana date chengarava, kana kuti kubvumira mawa kwokubatana.
Zvichida dambudziko rako uye kumirira timeout chaizvo nokuti mashoko chengarava 2101 kuva akasiyana, zvokuti pane Bottleneck mu zvinotevedzana kwokubatana, sezvo chiteshi anochengeterwa mutengi vari kushandiswa.
saka, imomo Filezilla apo kuwanda "PASSIVE Mode Settings" ( http://taylorlopes.com/wp-content/uploads/2010/10/fz11.png ) rinotsanangurwa kuti 2101-2101, changed kuti zvakafanana 2101-2301. Muchiitiko ichi uchava siyana / siyana 200 zvengarava nokuti date Exchange. Asi usakanganwa kuti azivise rotonhorera uyewo router uye firewall!
28 Ndira 2012 kuti 8:55
Thanks Taylor, akasarudza! I kuedzwe nzvimbo dzakawanda uye zvanaka zviri. Blog wako kucherechedza 10!
28 Ndira 2012 kuti 23:59
Maciel Lopes akati:
Makorokoto chiso Tutorial, zvakanaka kwazvo, asi zvinosuruvarisa I vasingagoni, pamwe ndiri munhuwo zvake.
Kudhonza Indaneti Hi / Velox panhumbi 2MB Via RJ-45 waya kuti PC yangu. Ndine Windows 7 chivavarirwa 64 Bits, mumba pedyo ane ZTE ZXDSL Series Modem kutumira chiratidzo kuna encore ENHWI-N3 router. Ndakaita zvose, liberei pamusoro Filezilla inowanikwa kuna Filezilla hapana Firewall, vakasununguka sezvo portas 2100 E 2101 Uyewo Firewall. Ndakaedza Redirect omunharaunda IP yangu pamusoro Modem uye router, reteador akaisa IP pamusoro Modem uye hapana. Hapana imwe Guy, Ndipei chiedza, Ndapota!
2 Kukadzi 2012 kuti 3:05
Maciel, zvakaoma kukwanisa kubatsira hauna chaiyo kukanganisa. Tingatoti tinofanira kuva noruzivo kushanda hurongwa / kombiyuta kuti dhipuroya ftp, kunyanya kana ukapa dambudziko. Tora iverengwe chinyararire ari pamusoro apa, anogona kuona aine dambudziko / mhinduro. tanga kuita basa munharaunda Filezilla (ftp://127.0.0.1:2100), uye chete ipapo kuidza Internet kushandisa DDNS uye kunetseka pamusoro kuita zvakarurama redirection pakati zvengarava pamusoro router.
4 Kukadzi 2012 kuti 13:52
shamwari, akanakidzwa ichi Tutorial yenyu, vakawanda vane dambudziko! Ndinoshandisa 3G Modem mupenyu uye kana ini kushandisa womukati Rinozvikudza ip musi FileZilla Server ftp anovhura, zvimwe kana ini kushandisa Modem Rinozvikudza ip haaiti basa CHERECHEDZA: Vhurai nzvimbo yakaratidza nomumwe itsva kubatana kuti Modem nokuti tinoziva kuti IP anoshandura kubatana ose itsva 3g. Ndinonzwisisa kana nepfambi angandibatsira mubvunzo uyu!
4 Kukadzi 2012 kuti 13:18
Rafael, Handina kuwana kushandisa ftp pamusoro 3G; Handizivi kana paine blockage pedyo opareta. zvisinei izvi, Kana wako 3G Modem chokuita kombiyuta yako / notibhuku, PASINA ROUTER, saka nguva dzose unofanira kuwana ftp Server (filezilla) pamwe kosha IP Internet, izvo zvinogona kuonekwa http://meuip.info/. Zvinonzwisisika IP ichi anoshandura kubatanidza ose, chikonzero chinorehwa kushandisa DDNS DynDNS kana No-IP. It ane Website unokubvumira kushandisa ftp wako, chete usakanganwa kuchinja mutauro kuti “ChiPutukezi” uye tarisa nezvechisarudzo “tinyerere”: http://www.net2ftp.com/
4 Kukadzi 2012 kuti 13:42
Zvakabatsira kwazvo, makorokoto mupiro.
mubvunzo, nokuti anoshandisa musuo 2101 pachinzvimbo 21?
5 Kukadzi 2012 kuti 23:36
Oi, chikonzero chokuchinja ichi ini akatsanangura nokukurumidza muna Post pamusoro uyewo Post http://taylorlopes.com/?p=1021, asi nokupfupikisa imhaka vamwe ADSL rinobatsirwa adzikatidza default ftp chengarava (21). Falouuu, kumbundirana!
6 Kukadzi 2012 kuti 7:04
Kara Ystúpido akati:
nzira, ona chete, Ndinogona munharaunda kuwana pasina matambudziko, Via anotungamirira 2100. zvisinei, Ndiri kubva imwe kombiyuta havagoni kuwana kana kusarudza kuti aise zita uye pasiwedhi, Via esta musuo. Strange ndechokuti, kana ndaisa mukova 21, kusarudza zita uye pasiwedhi akauya. chido, saka, Ndaigona kuwana Via chengarava 21? In wokutanga kuedza, kana ndikaisa pasiwedhi uye zita, haana kushanda. Ndinofunga kuti kuva nyore kusunungura mukova 21, kwete? Nokuti abuda pasiwedhi uye zita kunge akazviratidza kwaari… Ndakaedza vachishandisa hapana-Rinozvikudza ip, mumwe pakombiyuta neimwe samambure.
PS.: Uye kuwana Via ftp tunneling zviri nyore kuita? Rine zvimwe ngozi kuti?
10 Kurume 2012 kuti 17:51
zvekwaunogara zvinoshanda, mumwe kombiyuta raiva basa… ona kana asiri antivirus, dzokorora firewall pazviruva sezvo Post, nezvimwewo… humboo chiteshi anofanirawo kusunungurwa (2101)… kana chiteshi, mabasa, Sezvo kudanwa zvinoitwa nemazvo. No-IP ndicho chinhu chokupedzisira unofanira kunetseka… kuwana kubva PC mumwe, edza kuita kumutumidza IP (kana zita)… Unofanira kuva zvimwe yokuti network… falouuu!
16 Kurume 2012 kuti 19:17
masikati akanaka! ngaavongwe nokuti mutungamiriri First.
Ndaiva dambudziko kuti vamwe vaiva: Handikwanisi kuwana Server kubudikidza zvokunze Rinozvikudza ip. Ndakaedza zvose, desativei Anti-utachiwana E firewall, reconfigured zvose uye hapana. Kuedza masuo t1shopper.com vakawana kuti havana kusunungurwa. kwete 21 kwete 2100 kwete 2101, zvisinei, ari router Kurongwa (d-batanidzo 524 – 150 Wireless) vanoonekwa sezvo kukiyiwa. Ndakacherechedza kuti router yangu haina nzira kuwana SPI configuration, kungava dambudziko?
Thanks uye kumbundirwa!
13 Kurume 2012 kuti 12:48
hazvirevi sokuti kuva dambudziko SPI ... mukova chinofanira rakazaruka parutivi bvunzo ... unofanira kuona kana router wako "chiso" paIndaneti, mune mamwe mazwi, kana ari uya chokuita Indaneti kana paine nhume munyaya ino ... kuona kana router ari paIndaneti, chete kushanyira zviruva dzenyu nokuda Browser uye kuongorora mamiriro kana akapiwa musoro IP Internet ... kana munhu vakagoverana Internet, mhando redhiyo, kana chinhu, ipapo ichava zvakaoma, kana iwe kuwana chikuru router (paIndaneti) ita redirection (Nat) nokuti iwe ...
16 Kurume 2012 kuti 19:25
Bruno Mondini akati:
Buddy, Tutorial wako wakanaka chaizvo, makorokoto!
saka, I setup FileZilla, Akasunungura masuwo uye akanga sussa, Asi ndinogona chete kuwana folder kana ndinoshandisa yomunharaunda hondo.
Kana kuedza Remote Access, anobvunza Login uye pasiwedhi, uye anopa timeout. Simply kupinda.
pakupedzisira, haridzimi ari kure! :\_
Chero pfungwa zvingaguma?
mumwe mubvunzo: Unogona kuita kure kuwana hondo “hostdeexemplo.no-ip.org” pane kushandisa IP??
17 Kubvumbi 2012 kuti 1:40
Anotevera nerogi zvinoitika zvino angadaro ari Browser pamusoro yomunharaunda hondo. Ndizvo cherogi kana mumwe munhu akaedza kuwana ari kure.
Kana uchiziva kuti andibatsire, ndokutenda zvikuru. :D
(000084)17/04/2012 01:47:57 – (kwete Logged mu) (127.0.0.1)> 220-FileZilla Server VERSION 0.9.41 Beta
(000084)17/04/2012 01:47:57 – (kwete Logged mu) (127.0.0.1)> 220-yakanyorwa Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
(000084)17/04/2012 01:47:57 – (kwete Logged mu) (127.0.0.1)> 220 Please kushanya http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000084)17/04/2012 01:48:03 – (kwete Logged mu) (127.0.0.1)> User muenzi
(000084)17/04/2012 01:48:03 – (kwete Logged mu) (127.0.0.1)> 331 Password kunodiwa nokuti muenzi
(000084)17/04/2012 01:48:09 – (kwete Logged mu) (127.0.0.1)> Pass
(000084)17/04/2012 01:48:09 – muenzi (127.0.0.1)> 230 Logged pamusoro
(000084)17/04/2012 01:48:17 – muenzi (127.0.0.1)> Syst
(000084)17/04/2012 01:48:17 – muenzi (127.0.0.1)> 215 Unix emulated ne FileZilla
(000084)17/04/2012 01:48:17 – muenzi (127.0.0.1)> PWD
(000084)17/04/2012 01:48:17 – muenzi (127.0.0.1)> 257 “/” rikaparadzirwa dhairetori.
(000084)17/04/2012 01:48:17 – muenzi (127.0.0.1)> TYPE I
(000084)17/04/2012 01:48:17 – muenzi (127.0.0.1)> 200 Mhando wakaiswa kuti I
(000084)17/04/2012 01:48:17 – muenzi (127.0.0.1)> EPSV
(000084)17/04/2012 01:48:17 – muenzi (127.0.0.1)> 421 Vasingagoni kusika panosangana.
(000084)17/04/2012 01:48:17 – muenzi (127.0.0.1)> PASV
(000084)17/04/2012 01:48:17 – muenzi (127.0.0.1)> AREGE KUSVUTA
(000084)17/04/2012 01:48:17 – muenzi (127.0.0.1)> 221 Sara mushe
(000084)17/04/2012 01:48:17 – muenzi (127.0.0.1)> vasingadiwi.
17 Kubvumbi 2012 kuti 1:50
Karlos Bahia akati:
Ola Taylor, Ndini Karlos Bahia, I kuedzwe nzvimbo dzakawanda uye certinho.Aprovado zviri, Blog wako kucherechedza 10!
5 Nyamavhuvhu 2012 kuti 19:36
Ndine D-Link Modem, chokuita reteador Wireless AP-ROUTER
Handina kuwana pfungwa iyi Nat
Kupinda configuration asi hapana.
Kana ini vanofanira kuwana Modem Kurongwa D-EMAIL?
With paIndaneti 15 MB, kuchinjwa akadzikama?
mhando, ari Server yaizova 10 MB, kasitoma (Iwe achatuma achava 1MB kana 2MB muenzaniso) zvinoshanda zvakanaka?
31 Nyamavhuvhu 2012 kuti 18:58
edu, Ndakapedza pakupera kwevhiki zvose uye hapana.
Ndine D-Link muenzaniso kwakabatana kune reteador, Ini handigoni kuwana chinhu angu kureva Nat router nezvechisarudzo.
Ndakabva akochonorwa kuti waya unoendesa kuti router, uyewo, uye conetei zvakarurama rezvebonde wire kupinda PC kupinda Modem mikana, pane atotendeukira Nat chisarudzo, haana panovira haazivi kana kodzero iyi nokuti rakasiyana ake.
Asi kana Ndinoedza kubatanidza FileZilla Client :
mamiriro:	unobva 201.58.59.125:2100…
mamiriro:	kubatanidza kuedza akakundikana “ECONNREFUSED – Connection vakaramba ne Server”.
mhosho:	Vaisagona batanidza kuti Server
mamiriro:	Waiting kuti retry…
3 Gunyana 2012 kuti 18:35
Kukanganisa uku zvinoitika neni CesarFTP:
Error kuvhura forodha ichi pamusoro ftp Server. Ivai nechokwadi chekuti mvumo kuvhura forodha.
200 Nyorai Zvinobudirira kuisa
227 Kupinda pusa Mode (Rinozvikudza ip)
configured mu pachiteshi 21 uye pusa 2048-2148 muna CesarFTP asi anopa kukanganisa ichi pano.
11 Gunyana 2012 kuti 22:42
24 Gunyana 2012 kuti 20:26
Marcelo Pozati akati:
nzira , muito bom o tutorial de como criar o servidor FTP com o filezilla. Explica passo a passo , bem fácil mesmo. Funcionou direitinho. Mazvita
25 Gunyana 2012 kuti 1:28
Conforme meu ultimo comentario (http://taylorlopes.com/?p=1381&cpage=1#comment-16173) gracas a suas dicas, consegui fazer o FTP funcionar, tanto local (127.0.0.1) , na rede (192.168.0.3), quanto ip externo (aimbova: 188.155.22.245).
O problema esta no No-iP, pois ao acessar o “dominio”que criei (aimbova: pabloftp.no-ip.org), ele da erro “GET / HTTP/1.1 ….500 nemarongerwo kukanganisa, command unrecognized.” oque pude entender, ele esta tentando acessar como “HTTP:// ” e nao como ” ftp:// “. Estou pensando em usar o dynDns para ver se resolve.
Obs: Marquei a opcao “Use the following IP:” (mu “passive mode settings” mu “Options) e coloquei o No-iP , mas por causa do erro, nao funcionou.
27 Ndira 2013 kuti 2:57
Oi Pablo, ndokubva, você deixou explicito a chamada com ftp:// (uye kwete http://)? Se estiver tentando acessar de dentro da sua rede local, use IP local do servidor FTP, se for de fora da sua rede local, zvino kushandisa achazoburuka kana No-IP DynDNS, nokuti ndaona dambudziko iri chinoshamisa chinoitika. Iva nechokwadi chokuti No-IP chaizvoizvo kuitwa yoku- aine IP itsva, kana kuchinja; Imomo mune No-IP nzvimbo ine kushanda kuti unogona gadza pamusoro Server kuti achinyevera No-IP neimwe nguva kero kuchinja… akataura!
27 Ndira 2013 kuti 9:47
ndokubva, kana ftp ndiko kushanda, Ndiri Parizvino chokuita kuburikidza Android vachishandisa Indaneti urongwa Tim Infinity. Ndinogona kuwana Server kubudikidza Rinozvikudza ip vakagwinya, Ndaigona uchatamisa mafaira (asi anononoka nokukurumidza Eh aona kuti kushandiswa 2G ).
O dambudziko haasi asina-Rinozvikudza ip, Log in filezilla kuwana zvinotevera mashoko kana kuedza kuwana configured hostname.
500 nemarongerwo kukanganisa, murayiro harimboonekwi
500 nemarongerwo kukanganisa, murayiro harimboonekwi”
Obs: Ndiri angadaro ari Chrome Browser musi Android.
Inogona batanidza kuti Server, zvikuru vari kushandisa sezvo HTTP, uye urombo, Handikwanisi kuwana panzvimbo marongero kuti chikumbiro sezvo ftp.
OBs: I akasika kunyoresa zviri DynDNS, asi pashure “adzorere nzvimbo musoro muromo”, Ndakaona kuti hapana mamwe vakasununguka kuwana.
27 Ndira 2013 kuti 20:09
Alan Pereira akati:
Ufa, zvakashanda! Teverai wakazara Tutorial, asi handina kukwanisa kubatanidza Via Internet, ipapo ini kutevera mazano uye akaisa Modem mu zambuko, nepamahofisi PPPoE router authentication Pro. Basa iri nguva!
31 Ndira 2013 kuti 22:29
Luis Felipe Figueiredo akati:
makadii, I kuziva kana kuti kushanda zvakanaka kuti zvekunze zvakaoma ngarurege kwakabatana kune router (ari TP-Link TL-WR1043ND ane faira Server basa, Somuenzaniso).
Izvi zvinogoneka chete Seagate GoFlex Net Media Kugoverana mudziyo (STAK100) uye kwokunze zvakaoma ngarurege dzinounzwa kwairi, asi handigoni kuwana STAK100 ichi kutengesa muBrazil (chete I akawana Website iyo aibudisa asi anodhura kukudyira 5x, usingabereki mupumburu).
26 Kukadzi 2013 kuti 14:16
makadii, chete router havaoni sei, kare kuti haugoni gadza Filezilla.
28 Kukadzi 2013 kuti 20:59
makadii shamwari, Ndaisagona kuwana zvokunze kubatana, ane mhinduro?
19 Kurume 2013 kuti 22:11
Marcos, tora Kutarira wongororo kubva nevamwe uye mhinduro, may rubatsiro. Kana kuti mashoko chaiwo pamusoro nyaya kunzwisisa zviri nani… akataura!
29 Kurume 2013 kuti 21:56
Rodrigo Cury akati:
Taylor, makorokoto pamusoro pambiru uye kushivirira vakaratidza saka kure; Ndakaonawo izvi pamusoro Tutorial yakanakisisa kugadzira ari FileZilla pamambure. Chete caveat mumwe: Chirongwa unofanira vakwanise mahwindo firewall ndiye FileZilla Server, kwete FileZilla Server inowanikwa, zvimwe?
Ndinenge rambai ziso Blog wako aone kana I kudzidza zvakawanda.
4 Chikumi 2013 kuti 23:25
ndatenda, Rodrigo. nzira, mu 2010 kana ini kuposita chaiyo yakanga kunyange filezilla Server inowanikwa. Handizivi kana ichi rakachinja nhasi… akataura!
5 Chikumi 2013 kuti 0:32
shamwari akaita zvose zvakanaka kana zvimwe kuwana munhu kuti kuwana chikanganiso mune pusa nzira uye anoratidza ini Rinozvikudza ip yangu anoteverwa 8,53
22 Chikumi 2013 kuti 11:12
mhoro Rafael, Ini pfungwa iwe woripa kuverenga zvakataurwa. Unofanira kuziva chikonzero chacho, hazvina kuoma rubatsiro; ona kuti FileZilla ane Onawo apo unogona kutarisa zvichibvira matambudziko akanyorwa. Tora Kutarira mhinduro yandakaita “Taylor Lopes 8 Kurume 2011 pa 9:33”. Onawo imwe shamwari aiva dambudziko uye akariita kushanda chete nokuda pakusarudza “Shandisa zvinotevera IP in pusa muoti setings”. pakupedzisira, kuita basa munharaunda uye chete wozoedza kunze mukati (Indaneti). Chero zvazvingava, verenga mashoko, Rine Mazano zvakakwana. rombo rakanaka!
23 Chikumi 2013 kuti 0:08
shamwari yepamwoyo akaita HD rangu zvose zvakanaka kuwana mamwe Indaneti zvikuru chete yeGmail.END_STRONG faira zilla iri kuratidza bhora kupfuura kana kuva nenguva kuongorora inotiudzawo ini inotevera kukanganisa.
kukutadza kuvhura forodha ichi pamusoro ftp Server. Ivai nechokwadi chekuti mvumo kuvhura forodha.
227 kupinda pusa muoti 192,168,0,2,8,53
24 Chikumi 2013 kuti 17:56
Mto akarwa mukomana Q zvose vachinzvera Internet yako kunze kwazvo yakanaka uye akatsanangura ndaigona kuita zvakanaka pasina kukanganisa, pano mukova wakanga nyore mto kuti router yangu / Modem uye WiFi Eh chimwe Unit mupenyu atova anoita zvose zvakatoparara kwerubwinyo rwakagara rwuripo monica nzira kuti masuo sezvo play3, Xbox, nezvimwe Eh zvose nzira otomatiki Q ndinoita akafanana basa mto kwokunze mumba mangu vatengi uye tals dzimwe nguva vanoda faira Q ichi yangu Hd zvino zvanyanyisa chaiyo Internet 8mg ikozvino vlw 400$ Internet download musarudzo uye havafaniri kutora zvakawanda pamusoro zvokunze HD mto achivonga uye makorokoto nokuda kugoverana ruzivo urwu nesu!
Kuti zvose zvakanaka muupenyu hwako nekuti vanhu saka kure maturo parabens
uye kuvonga zvakare!
5 Gunyana 2013 kuti 12:56
5 Gunyana 2013 kuti 13:53
Dionne Gonçalves akati:
I zviruva zvose, asi nguva dzose nevanhu kukanganisa ichi: kubatanidza kuedza akakundikana “ECONNREFUSED – Connection vakaramba ne Server”.
15 Chikumi 2015 kuti 21:29
Carlos Alexandre akati:
Tutorial Your ane zvishoma hwokugadzira mashoko akawanda Indaneti, iri nyore uye pamberi Ndakaverenga, uye iye ndiye chakaita kundiendesa kubudirira!
Handina kupindura, asi iwe yakakodzerwa saka.
28 Chikumi 2015 kuti 19:02
Configuring DDNS kuti tenderera Via Modem + router Kanganwa No-IP uye DynDNS! Ita router kwenyu kushanda zambuko muoti uye kugadzira DDNS pamwe DNS-O-Matic. Problema Aviso: Post Izvi zvimwe zvekushandisa pfungwa chisingazobudiswi kugadziriswa. Tudo começou quando recebi da operadora Oi um...
Copyright © 2022 taylorlopes.com kubva Oct 2012, 3.470.017 upindo